Iska diyaar u ah inay la Rujiyo la Italy tareen by xilligan aad talaabo cagta eee ay ciidda weyn. dalkii reer taariikhda, naqshadaha weyn, dhaqanka wayn oo sida xarrago, dadka casri ah iyo sidoo kale-mannered noqon doontaa wax aad xusuusan doonaa ilaa maalinta ugu dambeysa! Ma doonaysaa in aad ogaato waxa qarsoon a? Italy tareen waa ka sii cajiib badan waad qiyaasi kartaa!
ikhtiyaarka ugu fiican yahay si aad u hubiso soo baxay Italy tareen, iyo in ay ahaan dhinaca nabad ah: isbarbar dhig qiimaha, taariikhaha iyo waqtiyada iyo hesho fursada ku haboon miisaaniyadda iyo map safarka. Eegno labada inay is barbar dhigaan jadwalka. u badan tahay in lagu qaldin doonaa inaad eraybixinta ah, sidaas darteed halkan yihiin foomamka soo gaabiyey waxaad ka heli doontaa on the Goobta Trenitalia:
Waa in aad buugga Italy by Ticket tareen Online ama iibso Waxa at Station ah
news weyn oo ku saabsan tayaasha tigidhka in Italy tareen waa in nidaamka jaale online flawlessly shaqeeya iyo waa super lagu kalsoon yahay. Stations jiri karto meel walba buuxo - oo u baahan nooca IN of stress, xaq u? Waxaa lagu siinayaa ikhtiyaarka in ay ama buug ama si toos ah bixiso tigidhada tareenka online. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad tahay oo dhan oo ku saabsan Ukaalmayn - sugto ilaa aad hesho si aad saldhigga iyo iibsato tigidhka ka dibna.
Sidee Baan in Italy tareen Marka aad qaadatay Ticket
Marka aad hesho in Italy ay tareenka, aad qorista soo socda waa guddi daah weyn. Taasi waa meesha aad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay updated. Haddii aadan arkin guddiga, raadiyo dad ka mid ah dadka hoose wax weyn taagan - oo voila! Haddii aad uma fiirsatid aad tareen isla markiiba ku qoran, ha bilaabin argagaxsanaayeen. Hubi in aad raadinayso ee "Partenze" (bixitaanka) halkii "Arrivi" (dhowaan yimid) si looga fogaado jahawareer. Fursada ugu yaraan wareer ah oo dhan waa in ay tagaan waqtiga tirada tareen oo ka tagay. Marka aad hesho tareenka, ka raadi "QASHIN,"For" binario " (madal). Marka aad heshay in soocaa, aad tahay xaq in ay tagaan!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/guide-to-italy-by-train/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)